उपचार खर्च तिर्न नसक्दा केन्याका अस्पतालमा सयौं बिरामी बन्दी | Hamro Doctor News
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा केन्याका अस्पतालमा सयौं बिरामी बन्दी
By मारिया चेङ
केन्या, १४ कात्तिक । पूर्वी अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो केन्याट्टा नेसनल हस्पिटलमा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग सम्बन्धित दर्जनौं परियोजना सञ्चालित छन् । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रको भनाइमा यो मेडिकल संस्था ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रुपमा परिचित छ ।
अस्पतालको वेबसाइटमा गर्वका साथ भनिएको छः हामी ध्यानपूर्वक सुन्दछौं । हामी तपार्इँको सेवामा छौं । वेबसाइटमा मुस्कुराइरहेका चिकित्सकहरु, खोप अभियान र पुरस्कार वितरण समारोहमा सुनौला ट्रफी उचालेका कर्मचारीका तस्वीरहरु राखिएका छन् । तर। यी तस्वीरमा एक वर्षअघि लुटपाटको एक घटनामा गोली लागेर पक्षाघात भएका रोबर्ट वानीओन्यीको तस्वीर छैन । केन्याट्टाले रोबर्टलाई अस्पताल छाड्न दिएको छैन किनभने उनले अस्पतालको बिल करिब ४० लाख केन्याली सिलिङ (३९ लाख ५७० अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । उनी चौथो तलाको शैयामा बन्दी अवस्थामा छन् ।
सुन्दै आश्चर्य लाग्नसक्छ, तर अस्पतालहरुले बिरामीलाई गैरकानुनी रुपमा बन्धक बनाउँछन् । उपचारका दृष्टिबाट डिस्चार्ज गर्न योग्य भइसके पनि अस्पतालको बिल भुक्तानी नगर्ने बिरामीहरुलाई अस्पतालभित्रै थुन्ने, सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा राख्ने र कतिपय अवस्थामा साङ्लो समेत लगाइदिने गरेको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा आमा र बालबच्चालाई अलग्याइने गरिएको पाइन्छ ।
बिरामीको मृत्यु हुँदासमेत शव लैजान पाइन्नः
केन्याली अस्पतालहरु र शवगृहमा त्यस्ता सयौं शव अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, अस्पतालको बिल भुक्तानी नगर्दासम्म ती शव परिवारले लैजान पाइरहेका छैनन् ।
हार्भर्ड ग्लोबल हेल्थ इन्स्टिच्यूटका निर्देशक डा. आशिष झाले यो संवेदनशील विषयमा जति गहिरो रुपमा अध्ययन गर्यो त्यति बढी समस्या देखिने बताए । यो समस्याबाट विश्वभर सयौं हजारौं होइन लाखौं मानिस प्रभावित भइरहेको उनले बताए । झाले भने, ‘यो समस्या केही सानो संख्याका मुलुकमा मात्र भइरहेको छैन । यसलाई कसैले पनि राम्रोसँग ध्यान दिएकै छैन र सार्वजनिक जनस्वास्थ्यको राडारबाट यो विषय छुटेको छ ।’
अन्तर्राष्टिय संस्था चुपचाप
क्वीन म्यारी विश्वविद्यालय, लन्डनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सोफी हार्मनले विश्वमा स्वास्थ्यको क्षेत्रको यो जघन्य कुकर्म हो तर यसका बारेमा कोही पनि कुरा गर्न तयार छैनन् भन्छन् । ‘बिरामीलाई कैदी झैं राखिएको कुरा मानिसलाई थाहा हुन्छ, तर उनीहरु निःसहाय हुन्छन्, उनीहरुमा लड्ने क्षमता हुन्न । त्यसैले उनीहरु जेजस्तो पनि सहन बाध्य हुन्छन् ।’ उनले थपे ।
नैरोबीबाट करिब ३ सय किमी टाढाको मोई शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. फेस्टस एन्जुगुनाले आफ्नो अस्पतालले क्यान्सर पीडित बालबालिकालाई उपचार पछि पनि लामो समय राख्ने गरेको बताए । बाबुआमाले उपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बच्चाहरुलाई हप्तौं, महिनौं अस्पतालमा राख्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘चिकित्सक र नर्सलाई यस्तो कुराले पिरोल्छ, उपचार सकिएपछि उनीहरुलाई लामो समय अस्पतालमै राख्नु मानवीय त पक्कै होइन ।’ उनले भने ।
(सङ्क्षेपीकरण तथ अनुवाद सोमनाथ लामिछाने)